Futa တွင်အမျိုးသားအားကစားပြိုင်ပွဲအတွက်:အခမဲ့ Shemale လိုးဂိမ်းစုဆောင်းမှု
သောသူတို့အဘို့မဟုတ်လွန်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်၏အယူအဆ futa၊အတို futanari၊အရာသည်အခက်အလိုးကိုရည်ညွှန်းကြောင်းယင်းနှင့်အတူဗဟို။ နေစဉ်သူတို့နည်းပညာပိုင်းအမြဲမ shemales၊ဤဟာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းစဉ်းစား:အခြေခံအားဖြင့်၊shemale လိုး။ ယခုအခါ၊သင်ပေါင်းစပ် futa တူ၏အယူအဆ'ထီး'၊သင်သည်အဘယ်သို့အတူတက်အဆုံးသတ်? လက်ျာရဲ့! Dudes ရတဲ့သူတို့ရဲ့တင်းကျပ်စွာ asses သဆွဲထားချစ်စရာငယ်ကချစ်ခြင်းထက်ပိုပြီးဘာမှမတက်ဖြည့်စွက်ယောက်ျားလေးတင်းနှင့်အတူသူတို့ရဲ့အပူအမျိုးအနွယ်။, သဘာဝကျကျ၊ဒီအရူးနယ်ပယ်၊ထိုသို့မဟုတ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုလူတိုင်းနှစ်သက်၊ဒါပေမယ့်သင်ထင်လျှင်သင်ကြိုက်စေခြင်းငှါအခံစားကြည့်ပါဂိမ်းပုံစံဒီအပတ်ပတ်လည်ကအလွန်အယူအဆ၊ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်နိုင်ပေးအချို့ဆှကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများအတွက်အားဖြင့်သင်တို့၏လမ်းအကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်း။ ကျနော်တို့ကဲ့သို့သောအထင်နှင့်ကျနော်တို့စစ်မှန်ယုံကြည်သောအဘယ်သူမျှမစီမံကိန်းထွက်ရှိပါတယ်အခုအချိန်မှာအတတ်နိုင်သင်ဆောင်ကြဉ်းရန်အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်အားကစားပြိုင်ပွဲအကြောင်းအကြှနျုပျတို့ရရှိနိုင်သောရှိသည်။ အုပ်စုကိုနောက်ကွယ်မှဤအရာတို့သည်အကြွင်းမဲ့စက်နှင့်သင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရုံမည်မျှအချိန်၊အားထုတ်မှုနှင့်စွမ်းအင်သို့တင်ဖန်ဆင်းခြင်းအရာတွေကိုပူဇော်ဖို့ရှိသည်။, Futanari အလမ်းအပေါ်အပွင့်နှင့်အသင်အခမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပူးပေါင်းဖို့ရန်သင်ချင်တယ်ဆိုရင်–ပဲရရပိုကောင်းဒီနေရာမှာထွက်ပေါ်ကနေ!
နည်းလမ်းတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့သေချာအဖြစ်များစွာသောလူအနိုင်ကစားရန်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ရှိသည်အဖြစ်ဖြစ်နိုင်ကနေတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရာက္ဇာပို့ဆောင်မှုစနစ်။ လူသဘာဝသံသယမှကြွလာသောအခါဒေါင်းလုပ်ဆွဲညမ်းဂိမ္းကိုမိမိတို့ကွန်ပျူတာ:သင်အဆက်မပြတ်စိုးရိမ်ကြောင်းကို malware အပေါင်းတို့နှင့်အမျိုးအစားအရာဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းစွာ၊အလွန်ကြီးစွာသောသတင်း Futa ထီးဂိမ္းအမ်ဳိးအပေါင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လွှတ်ပေးမှတဆင့်ရာက္ဇာနည်းပညာ၊ဒါကြောင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သည်ဤအပေါ်ယခု Chrome၊မြေခွေးမှာသို့မဟုတ်ဆာဖာရီ၊သင်ရှိသည်လိမ့်မည်သုညကိစ္စရပ်များကြည့်ရှုအဆိုပါဂိမ်းများကျနော်တို့ရရှိပါသည်။, ဒီမဟုတ္ပါဘူးလျှောက်ထားဖို့ပြတင်းပေါက်စက်ဖြစ်စေ:အများအပြားဂိမ်းကစားဒီနေရာမှာအသုံးပသျှူးနှင့် Linux စက်ချိတ်ဆက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ရက်နဲ့ဂိမ်းညအလွ။ ဘာတောက်ပကဤချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်သင်သည်သင်၏လျှော့ချအန္တရာယ်များဗိုင်းရပ်စ်၊လူတိုင်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအားလုံးအချက်အလက်သိမ်းဆည်းဖို့အတိမ်နိုင်ခုန်ဖြောင့်တစ်ဂိမ်းသို့စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုဘဲအတွက်ကြောင့်ဒေါင်းလုပ်သို့မဟုတ်တပ်ဆင်။ ဤ၊အပေါင်းကိုဂရပ်ဖစ်များနှင့်ဂိမ်းအပေါင်းတို့ထက်ဝေးပိုကောင်းအများစုဟာဂိမ်းများသင်ပထမနေရာအတွက်–ကောင်း၏ဖြစ်နိုင်မည်?, ကျနော်တို့တကယ်လို့ရွေ့လျားဘားနောက်ထပ်တက်ပီးလူကအရူးမကယ်မလွှတ်နိုင်စွမ်းညမ်းဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းအဝေးထက်ကျော်လွန်၎င်းတို့၏ရလဒ်တွေ။ ယခုဘူးသောဟန်တစ်ခုခုနဲ့တူချင်မှတူဆက်စပ်? ငါမအလောင်းအစား! တက်လက်မှတ်ထိုးဖြစ်ပါသည်တစ်အပိုင်းအပိုင်နှင့်သင်အခုအချိန်မှာထိုသို့ပြုသုညနှင့်အတူကိစ္စများကို၊ဒါကြောင့်ထွက်ရ၊မိတ်ဆွေ!
ကျွန်တော့အထင်အဝန်းမှာ Futa ထီးဂိမ်းဖြစ်နိုင်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကောင်းဆုံးင့်သောအစဉ်အလာအဖြတ်အတွက်ဂိမ်းကစားအာကာသ–ဒီကောင်တွေကပဲအရူးအကြောင်းအရာများကိုရှိသည်နှင့်အဖက်ဆာဗာအရမ်းအလုပ်များ! ကိုသာမကလူအများကြီး futanari၊ဒါပေမဲ့သူတို့အကြောင်းပြောဆိုနယ်ပယ်၊အမျိုးမျိုးသောနည်းများအတွက်ဂိမ်းရှိသည်နှင့်ပင်ကြိုးစားတက်လာနှင့်အတူကြီးစွာသောအသစ်အတွေးအခေါ်တွေပေါင်းထည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏။ အ futanari ပျော်နိုင်မှရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်အဘယ်သူအားမျှမှဒုတိယ၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ယုံကြည်ကြောင်းအရာဓာတ်ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုခုမဖွစျနိုငျနိုင်ခဲ့။, ယူကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်များအလွန်အလေးအနက်နှင့်လည်းတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောအရာရှိများဖိုရမ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာပို့စ်ရှည်ပုံစံအကြောင်းဆွေးနွေးသင်ချင်သမျှကိုအတူအခြားလူများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်း။ ငါကလည်းင့်ရှေ့တော်၌ငါပြောလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်နောက်တဖန်:အားလံုး futanari ဂိမ်းအသိုင်းအ၊ကျနော်တို့မှာအကြွင်းမဲ့အကောင်းဆုံး။ ရှိပါတယ်ကိုလည်းလစဉ်ပြိုင်ပွဲနှင့်အစည်းများ၏ဆုများအတွက်ရရှိနိုင်တွေဟာကြောင်းကောင်းစွာ–တော်တော်ချိုမြိန်၊မှန်သော?
ရကနေ့မှာ Futa တွင်အမျိုးသားအားကစားပြိုင်ပွဲ
ကိုယ့်အကြောင်းဒါကြောင့်ငါ့အဘို့ shilling ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု:သင်စဉ်းစားသင်ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့ဤနေရာကိုပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်? ငါသေချာပါဘူးအဘယ်ကြောင့်ဟူဖြစ်ပါသည်၊ကိုယ့်မည်သူမဆိုနှင့်အတူတစ် fetish အလိုး shemales အရအရေးယူအပေါ်ကျနော်တို့တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်။ ခင်ဗျားသက်သေအမွေးအရာတစ်ခုခုကိုအမှန်တကယ်မော်ကွန်းမင့်သွားအံ့သောအခါဤလောကတနိုင်ငံလုံးကိုသိတယ်ကျွန်ုပ်တို့၏အမည်နှင့်အရာအားလုံးရှိသည်ဖို့ငါပေးအဆိုပါဂိမ်းကစားကိုအထွက်ချင်သော။ ကျွန်တော်အတည်အမှန်တကယ်ထူးခြားတဲ့အာကာသႏွင့္ကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နေဆဲလာရန်သေး။, စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးမေ့:သင်ချင်တယ်ဆိုရင် Futanari ချမ်းသာ၊Futa ထီးဂိမ်းများသင်ဖုံးလွှမ်းလျက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အချို့။
တက်လက်မှတ်ထိုးယခုအဘို့သင်သည်သင်၏အခမဲ့အကောင့်နဲ့ဂိမ်းအတွင်း Futa တွင်အမျိုးသားအားကစားပြိုင်ပွဲအတွင်း ၆၀ စက္ကန့်!